Handresy lehibe amin'ny Starmania rehefa manana kintana an-tapitrisany miandry anao mba mihodina. Zavatra tsy mahagaga slot milina manana foto-kevitra maro loko sy miramirana ny kintana izay hahatonga anao ho raiki-pitia aminy. Tsy nofinofy fotsiny ny mahatratra ny kintana, fa ity lalao ity dia mitondra azy ireo ho any aminao, eo amin'ny efijery ihany Top slot. Raha toa ianao ka misy olona izay mankafy ny hatsaran-tarehy ny lanitra amin'ny alina, dia ity lalao ity dia natao ho anareo. Tsy vitan'ny hoe ny sary ity lalao mahafinaritra, izany ihany koa dia manana miverina ambony ny tahan'ny ny mihoatra noho 95%!
Raha mihevitra ny vintana dia ao amin'ny famindram-po, dia hanandrana izany eo amin'ny nihodidina eto! Apetraho ny Bet araka ny teti-bola ary aoka ny harena hiteny ho azy. Rehefa mahazo ny fitambaran'ny kintana telo na mihoatra, izany ho fandresena. Fa izany fotsiny ny fototra fandresena. ao amin'io 5 reels ary 3 tsipika lalao, ny harena no ao amin'ny tànan'ny 6 miramirana kintana. Fa dia ny tampon-tanety, ary ny manahaka izay manana tsara lavitra miandry anao.
Ny kintana mampiseho ny harena tsara amin'ny Starmania!
Ny mpilalao dia afaka miloka na inona na inona avy amin'ny 0.10 to 20.00 nahazoan-dalana. miaraka 10 paylines rehetra, dia raisina ny winnings fomba roa - ankavia miankavanana sy ankavanana miankavia. Jackpot dia rehefa 5 lehibe kintana mena eo amin'ny slot amin'ny mandresy mitambatra, manome ny whooping 500 fotoana ny loka. Na dia rehefa afaka izany,, ny mpilalao dia afaka misafidy ny Gamble ny fandresena.
Ho fantatrao ny tsara vintana kintana eto!
Ny bibidia marika hita eo reels 2, 3 and 4 only, ary afaka soloina ny kintana rehetra, afa-tsy ny aelezo mariky. Ny aelezo marika dia tena mahafa-po mariky ny lalao. Miaraka araka izay 200 fotoana ny Bet ho handresy, izany ihany koa ny manome avy 10 free spins. Ary maimaim-poana ho an'ny rehetra namoly, misy bibidia izay tagged miaraka. Ao amin'ny tsorina,, ny sehatra mba handresy lehibe ihany no mahazo ambony.
Izany no atao hoe Star-MANIA noho ny antony! Natokana ho ny filokana rehetra-maniacs, ity lalao ity dia iray amin'ireo milina slot vitsy izay tena mahafa-po. Mora ny hilalao sy mahatakatra, tsy misy sarotra tombony fihodinana in ity iray ity. Ny foto-kevitra dia tsy manam-paharoa sy ny maso-misambotra, tsy misy marimaritra iraisana eo amin'ny fialam-boly, ary ny mpilalao ho afa-miala karena rehefa mitsahatra nihodidina tamin'ny Starmania!